ikhaya IIMALI ZE-EUROPE IGary Cahill Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-genius ekhuselayo eyaziwayo ngeSitelekiso; "Gandalf". Ibali lethu leGary Cahill Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Facts kuletha iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubuhlobo bentsapho, ubomi bentsapho kunye neeninzi ezininzi eziziwayo.
Ewe, wonke umntu uyazi ngamakhono akhe kodwa abambalwa bacinga uGary Cahill Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Gary Cahill Ibali leBantwana leNgcaciso Plus Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UGary James Cahill wazalwa ngomhla we-19th kaDisemba 1985, eDronfield, eUnited Kingdom.
Wazalelwa kunina, uJanet Cahill noyise, uHughie Cahill. UGarry Cahill wakhula kunye nodade wakhe kuphela, uPaula Cahill onokubhali umbhali.
Wayengumfana osemfana uShefield ngoLwesithathu umxhasi kwaye wakhula ebuka uSheffield ngoLwesithathu, kwaye uchaza kuDes Walker njengeqhawe lakhe lokuzalwa.
Ngethuba lokuzalwa kwakhe, uGary wayengumdlali webhola ekhatywayo yekholeji yaseDronfield, eNgilani. Umsebenzi wakhe onzima kunye nokuzimisela kwakhokelela ekuphumeleleni kwentsebenzo yolutsha kwi-AFC yaseDronfield kunye nokungena ngqo kwihlabathi lebhola lebhola.
Omhle uGemma Acton ngumnye kunye nomfazi othakazelisayo kuGary Cahill's Love Life.
I-Couple ngabazali abaziqhenyayo ngabantwana ababini, intombi, Freya kunye nendodana egama linguLeo Cahill.
Ngenxa yokuzalwa kwenkwenkwe yakhe, umdlali wavunyelwa ukuba awebe umdlalo e-Stoke njengentombi yakhe, uGemma wazala uLeo, owazalwa ngoJanuwari 2013.
Idrama yaqala xa umkhuseli wayefanelekile ukujonga Britannia Stadium, kwaye waya kwi Potter kunye neqela lakhe-matabane, kuphela ukufumana umnxeba wefowni ukusuka ekhaya owafuna ukuba abuyele ngasemzantsi.
Umfazi uGemma uye waya ekubambeni, kwaye ngoko-ke uneminyaka eyi-26 wayeya kwicala lakhe ngaphandle kwinqanaba le-defense ye-Chelsea. UGary uthe ngokuzalwa kwonyana wakhe;
'Umntwana ulungile, uyonwabile, uyavuya, kwaye siyavuya, ngoko yonke into ihambe kakuhle.
UGary uye wabuya waletha intsapho yakhe enomdla ukugubha ukunqoba kwe-Chelsea eStamford Bridge.
Gary Cahill Ifoto yeSapho
Esi sibini sibophe iqhosha ngoJuni 2013 kwi-Brookfield Manor, Hathersage, Hope Valley. UGemma wayeyintombi yakhe ende ngaphambi kokuba abophe iqhosha.
Umntu kaGemma ukholelwa ukuba umtshato uyinoni efanelekileyo ukuba anqobe nayiphi na imingeni.
Bobabini banandipha iprofayile esenzantsi kwaye uyathandeka usapho ubomi. Kumagama kaGary; ... "Intsapho yam ejikeleze kum nje iyinto eqhelekileyo, yonke into ebomini yam iyinto eqhelekileyo, ngaphandle kweKhabhinethi yam, inkulu,"
I-Gary Cahill Ibali leBantwana leNgcaciso Plus Untold Biography Facts -Wathukuthelwa ngabamelwane
Abahlali baseCobham e-Surrey, bathiwa 'Beverly Hills yaseBrithani', zisetyenziselwa ukufumana abadlali bebhola kwiidolophana zabo eziqhelekileyo.
Ngomhlaba wokuqeqeshwa we-Chelsea FC ekhoneni, kungokwemvelo ukuba abadlali be-Chelsea (bangathethi ii-WAGs kunye ne-supercars zabo) kufuneka bahlale kwezinye zamakhaya amakhulu apho.
Ngoku, yile mbambano ezayo; Isigqibo sikaGary Cahill kunye nomkakhe uGemma ukuba banqume indlu yabo baze bathathe indawo ye-£ 6million- £ 7million, amahlanu okulala 'mega-mansion'. bebathukuthelise babo abamelwane. Ngezantsi isicwangciso sakhiwo sekhaya labo elitsha.
Abahlali abalishumi elinamibini kwi-Fairmile Estate bakhala bentlondi ngendlela yokuvuma imvume.
I-Gary Cahill Ibali leBantwana leNgcaciso Plus Untold Biography Facts -U-Giroud's Thoughest Opponent
French Olivier Giroud uye wada wambiza umchasi wakhe ongokoqobo Premier League. Ethetha nomagazini wase Arsenal, indoda yaseFransi yathi i-Chelsea uGary Cahill njengomkhuseli onzima kunabo bonke oye wayidlala nayo.
'Unako ukuhlala utshilo ekuqaleni kwimidlalo ukuba kuya kuba yinyama, ' wathi Giroud. 'Kunye noGary Cahill e-Chelsea, ihlala yinto enzima kunye nempi. Unamandla kakhulu, kwaye udlala kakhulu umzimba wakhe ngoko kunzima ukukhuphisana naye.
I-Gary Cahill Ibali leBantwana leNgcaciso Plus Untold Biography Facts -Isishwankathelo somSebenzi
Kwi-1999, uGary Cahill waqala umsebenzi wakhe wokudlala inkqubo ye-AFC yase-Dronfield yentsha yaseDerbyshire.
Kwi-2000, wajoyina i-Aston Villa Academy waza waqhubeka nokuphuhlisa kwakhe. Kwi-2004, wajoyina iBurnley kwi-mboleko ehlala ixesha elide, apho wenza khona kakuhle ngaphambi kokuba abuyele e-Aston Villa ekuqaleni.
Kamva, watyikitya kwiklabhu yasekhaya yaseSheffield United kwintlawulo yemboleko yeenyanga ezintathu.
Ngo-30 uJanuwari 2008, watyikityela iBolton Wanderers malunga nama-5 yezigidi. UCahill wenza kakuhle iBolton ngeminyaka, uqinise indawo kwindawo yokuqala. Wenza ukubonakala kwe-130 kunye nokufumana iinjongo ze-13 zeBolton.
NgoJanuwari 2012, uKahill wasayina i-Chelsea malunga nama-7 yezigidi. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Gary Cahill Ibali leBantwana leNgcaciso Plus Untold Biography Facts -Oko aya ku khunjulwa
Ngenxa yamandla akhe anamandla entloko yakhe ekukhuseleni nasekuhlaseleni.
Ukulungiswa kwakhe okuhle.
I-real-score reoring from defense.
Ukuze ube ngokukhawuleza, okuqhubekayo kunye nokwethenjelwa kwendawo yokubuya.
Ngenxa yokunikezela kwakhe ubugcisa, kunye nokugqiba kwakhe.
Ukubeka isikhundla sakhe nokukwazi ukufunda umdlalo.
Ukuphumelela Premier League, i-FA Cup, i-Champions League, i-Europa League kunye ne-League Cup ne-Chelsea.
I-Ashley Barnes Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku leMbiniso ye-Ashold
I-Trent Alexander-Arnold Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
Februwari 12, 2018